Rolfes Robert Reginald Dhlomo
Magema Magwaza Fuze
ⓘ Busi Mhlongo
Busisiwe Victoria Mhlongo 28 ngoMfumfu 1947 – 15 ngoNhlangulana 2010 wabe umgumculi odumil wombahqanga owabe eqhamuka endweni yaseNanda, KwaZulu-Natali.
UBusi Victoria Mhlongo wazalwa ngonyaka we-1947 eNanda KwaZulu-Natali. Wayengumculi odume kakhulu ngokuxuba uMbaqanga, Maskandi Reggae, Rock, Marabi nezinye izinhlobo zomculo. UBusi Mhlongo wayecula umhlaba wonke ecula futhi enezinkulungwane zabalandeli
Ngeminyaka ye-1960 uBusi wayekade ehamba umhlaba wonke ecula. Umculo wakhe wawubonga abantu abathize uphinde ukhuze isizwe umculo wakhe uthinte abantu abaningi nabaculi abaningi
3. Umdlavuza nokudluma emhlabeni
UBusi wayekade ephethwe Umdlavuza webele phecelezi i- Breast cancer, i-SABC yabamba i-Benefit concert ngonyaka wezi-2006 lapho abaculi abaningi babeculela uBusi kanti abalandeli benikela imali ukuze athole usizo uMhlongo. Ngonyaka wezi-2010 emva kokulwa nomdlavuza webele, ukufa kwamhlula ukufa uBusi walala okokugcina ngo15 June 2010. UBusi ubekade engudadewabo kaNdaba Mhlongo ewayedume ngokulingisa. UBusi ubekade eyiSangoma kanti loku kwakunomthelela emculweni wakhe nobuyena.
ngoNhlolanja - Yukio Hatoyama, wayenguNgqongqoshe weJaphani 28 ngoMfumfu - Busi Mhlongo umculi nomlingisi ubefa 2010 26 ngoMfufu - Benedict Wallet Vilakazi
Wikipedia: Busi Mhlongo